Ịkụzi Egwuregwu Ọrụ Industrial - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (NHỌMỌDỤ SPECIALIZATION ỌKỤRỤ // FULL-Oge // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > ọkụ eletrik > Egwuregwu Egwuregwu Emeputa
Na Afọ Nlekọta 7 nke a na-ahụ maka afọ ọrụ Industrial Electricity (full-time / BSO) ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị na mmezi, mgbakọ na mmezi nke igwe elu, ọnụ ụzọ, ọnụọgụ (nkà na ụzụ, sayensị kọmputa, pneumatics, hydraulics); N'aka nke ọzọ na ikesa ike, ụgbọala na nnukwu nkà na ụzụ. Ọ bụ otu ọzụzụ bara uru. Site na mmezu ihe, oru na nyocha, ị na-eme kawanye ihe ọmụma nke njikwa kọmputa na usoro mmepụta ihe. Ị mụtara inye ọrụ ọma na anya maka nchekwa, ahụike na gburugburu ebe obibi.
Ị nwere mmasị na nrụnye eletriki na igwe? Ị dị mma na nke ziri ezi? Ị na-achọ iji aka gị rụọ ọrụ, kamakwa kọmputa?
Lelee ebe a na-amụ ihe nke afọ 7e maka ọrụ eletrik arụ ọrụ (BSO):
Ihe na-adịghị mma (37KB, .pdf)